Sidee mashiinka maaskarada loo masaxaa?
Saboolka ayaa qaadan doona naqshad si heer sare ah otomaatig u ah si loo yareeyo khaladaadka aadanaha isla markaana loo yareeyo xoogga loona badbaadiyo qarashaadka badan ee shaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, haddii tayada sheyga ay tahay in lagu gaaro saameynta aad rabto wax soo saarka otomaatiga ah, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso xuduudaha qalabka, taas oo ah, inaad hagaajiso qalabka ...
Sida loo dayactiro mashiinka isku-laabma
Haddii aan dooneyno mashiinka maaskaro loo isticmaalo si habsami leh oo cimri dheeri ah, waa lagama maarmaan in la sameeyo xoogaa dayactir ah waqtigii loogu talagalay. Gaar ahaan, maxaan ugu baahanahay inaan ku sameyno dayactir joogto ah mashiinka maaskaro iyo maxay yihiin faa'iidooyinka dayactirka? Waxaa sidoo kale lagu xusay t ...
Sida loo keydiyo batariyada lithium-ion oo aan mudo badan la isticmaalin
Batariga ionhi lithium waa batari adeegsada biraha lithium ama daawaha lithium sida walxaha korantada oo taban wuxuuna adeegsadaa elektrolytka aan biyaha marin. Sanadkii 1912, Gilbert N. Lewis (Gilbert N. Lewis) wuxuu soojeediyey oo bartay batariyada biraha ee lithium. 1970-yadii, Whittingham waxay soo jeedisay oo ay bilowday barashada lithium ...
Habka dayactirka saxda ah ee batteriga lithium ion
1. Batariga lithium-ion ee dhawaan la soo iibsaday wuxuu leeyahay awood aad u yar, marka marka isticmaaleha uu helo batteriga, si toos ah ayaa loo isticmaali karaa loona buuxin karaa ka dib marka la isticmaalo inta hartay. Ka dib 2 ilaa 3 jeer isticmaalka caadiga ah, ion lithium si buuxda ayaa loo hawl gelin karaa. 2. Ka hor tag kharash dheeraad ah. Charg u qalma ...
Farqiga u dhexeeya waji xidhka waasaska iyo maaskarada caadiga ah
Waxaan ognahay in wajiyadu guud ahaan loo qaybiyay waji dabacsan, waji duublaabasho, waji u eg kalluun iyo weji u eg koob. Intaas waxaa sii dheer, marka loo eego agabyada iyo isticmaalka maaskarada, waxaa jiri doona magacyo kala duwan, sida maaskaro kaarboonka firfircoon, waji caafimaad, iwm. Intaa waxaa dheer, waxaa jira ...
Buugga tilmaamaha mashiinka wajiga ee fidsan
Mashiinka maaskaro wajiga fidsan waa qalab isku dhafan oo si hufan u shaqeynaya, badanaa loo isticmaalo wax soo saarka si buuxda otomaatigga ah ee waji daboolan oo aan lahayn gees (gudaha) iyo dhegaha dibedda ka hooseeya afar lakab Qalabku wuxuu qaataa hal-ilaa-labo qaab-dhismeed wuxuuna adeegsadaa tikniyoolajiyadda alxanka ultrasonic. Waxay leedahay charac ...
Guuldarrooyinka guud ee mashiinka dhejinta mashiinka dhejiska dhejiska dhejiska ultrasonic
Ciladaha guud iyo taxaddarka mashiinka dhejiska dhejiska dhejiska dhejiska xiinka xijaabka ah: 1. Caaryado kasta iyo transducer kasta waxaa lagu qalabeeyaa marawaxad, si markaas saamaynta ku faafidda kuleylku ay ka sii fiicnaato. 2. Qaab-dhismeedka iyo shaagagga alxanka waa in lagu hagaajiyaa heerka, sinnaan la'aanta ayaa sababi doonta in alxamdu daciif noqoto. ...
Hawsha shaqada ee mashiinka maaskaro isku laaban
Mashiinka maaskaro isku laabma, sida magacu tilmaamayo, waa qalab si gaar ah loogu isticmaalo soo saarista waji duubashada. Waa mid hufan oo xasilloon, si buuxda otomaatig u ah, wuxuuna badbaadiyaa shaqada iyo qalabka. Qalabka oo dhan waxaa gacanta ku haya PLC. Waa qalab farsamo sare iyo wax soo saar maaskaro maskaxeed leh. Maska soo socda ...
Astaamaha Soosaarayaasha Mashiinka Mashiinka Laaban
1. Qaabku wuxuu ka samaysan yahay aluminium ka samaysan iyo bir bir ah, muuqaalkuna waa mid fudud oo qurux badan oo aan miridh lahayn. 2. Tirinta firfircoon waxay si wax ku ool ah u xakameyn kartaa awoodda wax soo saar iyo horumarka wax soo saarka. 3. Xakamaynta is-beddelka soo noqnoqda ayaa hagaajin kara xawaaraha hawlgalka qalabka sida ku cad ficilka ...
Mashiinka maaskaro isku laaban, oo sidoo kale loo yaqaan mashiinka maaskaro nooca C-ga ah, waa mashiin si buuxda otomaatig ah loogu isticmaalo in lagu laabo jirka maaskaro. Waxay isticmaashaa tikniyoolajiyadda 'ultrasonic' si loogu xiro 3 illaa 5 lakab oo ah dhar aan-tolmo lahayn oo PP ah, kaarboon firfircoon iyo walxo shaandho leh, iyo jarista maaskaro isku laaban Jirka waxaa loo farsameyn karaa 3 ...
Soo-saareyaasha mashiinnada laab-laabaya ayaa soo bandhigaya habka saxda ah ee loo xirto maaskarada saddex-geesoodka ah
Isku-laabashada soosaarayaasha mashiinnada maaskarada, in kasta oo bilowgii dayrta ay dhammaatay, cudurku weli ma dhammaan. Sidaa darteed, waa in aynaan fududeysan. Had iyo jeer xusuusnow inaad xirato waji-dabool marka aad baxayso. Hadda waji-galka suuqa aasaas ahaan waa waji-saddex-cabbir iyo waji caadi ah. Maaskarada, waxaan ...
Waa maxay habka lagu soo saaro waji-furka mashiinka maaskaro isku laaban?
Mashiinka maaskaro laabida ayaa badanaa ah mashiin si buuxda u firfircoon oo loo isticmaalo soo saarista waji-laabashada. Maaskarada waxay qiyaas ahaan u qaybsan yihiin waji dabacsan iyo wajiyo saddex geesood leh oo muuqaal ah. Sidee ayuu mashiinka maaskaro isku laaban u soo saaraa waji-waji? Aan si wada jir ah u wada fahanno mashiinka maaskaro isku laaban waa habka wax soo saarka ...